लगाउने हो बायोडिग्रेडेबल जुत्ता ? | गृहपृष्ठ
Home र यो पनि लगाउने हो बायोडिग्रेडेबल जुत्ता ?
on: April 16, 2018 र यो पनि
लगाउने हो बायोडिग्रेडेबल जुत्ता ?
वैज्ञानिकहरूले च्याउ, कुखुराको प्वाँख र खेर गएका टेक्सटाइल उत्पादनको प्रयोग गरेर बायोडिग्रेडेबल जुत्ताको निर्माण गरेका छन् । अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ डेलावेयर (यूडी)का अनुसन्धानकर्ताहरूले सामान्य उत्पादनबाट बायो कम्पोजिट सामग्रीको निर्माण गरेर त्यसलाई प्रोटोटाइप जुत्ताको तलुवा बनाउन प्रयोग गरेका हुन् । फेशन उद्योगले ठूलो परिमाणमा फोहोर उत्पादन गरिरहेका कारण स्थायित्वलाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा सबै जना छन्,’ यूडीमा स्नातकोत्तरका विद्यार्थी जिलियन सिल्भरम्यानले भने ।
मानिसहरू आफ्नो उपभोग गर्ने बानीमा परिवर्तन गर्दै छन् भन्ने कुराको विश्वास गर्न कठिन छ, तर यो जुत्ताको कुरा गर्ने हो भने जुत्ता पुरानो भएपछि वा यसको प्रयोग गर्न मन नलागेपछि यसलाई जमीनमा त्यसै फालेर फोहोर बनाउनु पर्दैन यसलाई कम्पोष्ट बनाउन सकिन्छ,’ उनले अगाडि भने ।
यो परियोजनाको काम सन् २०१५ मा शुरू भएको थियो । त्यतिखेर अनुसन्धानकर्ताहरूले हामीले खाने च्याउको डाँठ (मसरुम मिसिलियम)बाट फेब्रिक बनाउने कार्य गरेका थिए । उनीहरूले डाँठाका थुप्रै स्याम्पल उत्पादन गरे, त्यसलाई सुकाए र जुत्ताको तलुवा बन्न यो लायक छ कि छैन भनेर प्रयोग गरे । ती स्याम्पल कुखुराको प्वाँख र टेक्सटाइल उद्योगमा प्याकिङ सामग्रीको रूपमा प्रयोग हुने खेर गएका वस्तुमाथि उमारिएका थिए । भविष्यमा प्राकृतिक लुगामा यस्तो प्रकारको परीक्षण गर्ने वैज्ञानिक समूहको अनुमान छ । कुखुराकोे प्वाँख र टेक्सटाइल उत्पादनले मिसिलियमलाई पोषण प्रदान गर्ने र यसलाई हुर्किन पनि सहयोग गर्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ । यस्तो जुत्तालाई बजारमा लैजान थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्न बाँकी नै रहे पनि यो समूह यसले राम्रो प्रतिक्रिया पाउनेमा सकारात्मक देखिएको छ । रासस/पीटीआई